معلومات إسلامية بدون انترنت 1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ပညာေရး معلومات إسلامية بدون انترنت
معلومات إسلامية بدون انترنت ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
معلومات إسلامية (يعمل تلقائيا)
كل يوم معلومة إسلامية (سؤال وإجابته).. لكي تثقف نفسك إسلامياً بسهولة.. فقط اضغط على معلومة اليوم بعد تحميل التطبيق ليصلك كل يوم معلومة
"سأل سائل بعذاب واقع" من هو هذا السائل ؟؟
"تتبعها الرادفة" الآية7سورة النازعات.. فما المقصود بالرادفة؟؟
أي البلاد هي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى؟؟
ما هي حادثة إنشقاق القمر ؟؟
الإجابات: تعرف عليها من داخل التطبيق المليء بالمعلومات الإسلامية التاريخية والثقافية .. ولا تنسى نشره لأصدقائك والتقييم وجزاكم الله خيراً
ملحوظة: لتفعيل خاصية ارسال كل يوم معلومة إسلامية ادخل على معلومة اليوم أول مرة من داخل التطبيق بعد تحميله
နေ့တိုင်းတစ်ဦးအစ္စလာမ့်သတင်းအချက်အလက် (မေးခွန်းနှင့်အဖြေ) .. အလွယ်တကူအစ္စလာမ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပညာပေးရန်နိုင်ရန်အတွက် .. ကိုယ့်လျှောက်လွှာကို loading ပြီးနောက်ယနေ့သတင်းအချက်အလက်များ၏အပိုင်းအစပေါ်တွင်နှိပ်ပါနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များလက်ခံရရှိ
"ငါဝဒေနာအဖြစ်မှန်ကိုဆိုလိုသည်ဟုမေး," အဘယ်သူသည်ဤအရည်သည် ??
"Alradfh အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်" အခနျးင7Surat Pluckers .. Balradfh ဘယျအရာကိုဆိုလို ??
အဖြေများ: .. သူ့အမှသိကောင်းစရာများအစ္စလာမ့်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအတွင်းမှသူတို့ကိုသိရန် get နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများထုတ်ဝေဖို့မမေ့ကြဘူး, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မေလတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အကျိုးကို
معلومات إسلامية بدون انترنت အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
معلومات إسلامية بدون انترنت အား အခ်က္ျပပါ
alamel စတိုး039
معلومات إسلامية بدون انترنت ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း معلومات إسلامية بدون انترنت အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://skyray1.com/skyray_privacy_policy.html
App Name: معلومات إسلامية بدون انترنت
Release date: 2019-08-14 09:55:59
လက်မှတ် SHA1: 34:F5:87:CC:5E:70:84:A8:3C:73:4A:6C:57:B6:17:CB:E4:E1:51:5D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): skyray
معلومات إسلامية بدون انترنت APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ